Tag: onye mgbasa ozi mgbasa ozi ọhaneze | Martech Zone
Tag: mgbasa ozi mgbasa ozi mgbasa ozi
Gịnị bụ Mmemme Mgbasa Ozi & Ahịa?
Fraịdee, June 12, 2015 Monday, October 12, 2015 Douglas Karr
Teknụzụ ahịa na-aga n'ihu ugbu a ma ọtụtụ mmadụ nwere ike ha amataghị ya. Mgbasa ozi dijitalụ malitere site na nkwukọrịta na mgbasa ozi mgbasa ozi. Otu ihe atụ nwere ike ịbụ na ụlọ ọrụ ga-emepụta oge ya nke ọdịnaya, ahịa, mgbasa ozi na akwụkwọ ozi. Ha nwere ike tweak ma bulie ha maka nnyefe na ọnụego pịa-nke kachasị mma, mana karịa ma ọ bụ obere ọdịnaya nyefere na usoro iheomume - ọbụghị ndị ndu ma ọ bụ ndị ahịa. Akpaaka ahịa na-eweta